I-UsabilityHub: Nikeza bese Uthole Impendulo Yedizayini noma Yokusebenziseka | Martech Zone
NgoLwesithathu, July 1, 2015 NgoLwesithathu, July 1, 2015 Douglas Karr
Sifanele ukuhambela i- Iya Ekumaketheni Okungenayo inkomfa ebanjwe esifundeni ngu Isici Sesithathu. Bekungumcimbi omuhle nge-line-up emangalisayo yezipikha ezikhuthazayo nezifundisayo. Esinye sezipikha besikhona U-Oli Gardner, umbambisene we Ungavumeli abaqoqe ndawonye isethulo esisodwa ngokubaluleka nomthelela wokuhlolwa.
Sizokwabelana ngesethulo u-Oli asethula kokuthunyelwe okuzayo, kepha bengifuna ukwabelana ngelinye lamathuluzi asazise ngalo ukuthi ulithanda ngempela… UsabilityHub. I-UsabilityHub ikuvumela ukuthi wabelane nge-logo design yakho yakamuva ukubona umthelela wayo, wabelane ngezinguqulo ezahlukahlukene zekhasi ukuze ubone ukuthi iyiphi oyithandayo, noma uthole impendulo lapho abasebenzisi bangangena khona kusayithi lakho ukuthola okuthile.
Ungakwazi bhalisela ngaphandle kwezindleko futhi ube ngumsebenzisi wesiza ukunikeza impendulo kwabanye abasebenzisi. Izimpendulo ezivela kubahloli obamemayo zimahhala. Izimpendulo ezi-odiwe kumphakathi we-UsabilityHub zibize isikweletu esingu-1 lilinye. Izimpendulo ezivela kubahloli bezinhlobo ezithile zabantu zibiza amakhredithi ama-3 lilinye. Nobabili ningazuza amakhredithi ngokuhlolela abanye noma ungathenga okwakho. Uma uba yilungu le-Pro, uthola isaphulelo esingu-50% entengo yamakhredithi.
Nasi isibonelo esihle lapho inkampani ibihlola ukuthandwa kokuzulazula kwethebhu kusayithi labo:
I-UsabilityHub inezivivinyo ezi-4 zokusebenziseka ongakhetha kuzo
Ukuhlolwa kwesihlanu kwesiBili - Isivivinyo Sesibili Sesibili sikhombisa ukwakheka kwakho kumhloli imizuzwana emihlanu nje. Ngemuva kokuphela kwemizuzwana emihlanu, umhloli ubuzwa uchungechunge lwemibuzo oyicacisayo, efana Ngabe ucabanga ukuthi yimuphi umkhiqizo othengiswa yile nkampani?, noma Yayiyini igama lenkampani?.
Chofoza Isivivinyo - Amarekhodi wokuhlolwa kokuchofoza lapho abasebenzisi bachofoza khona kumklamo wakho. Umhloli ucelwa ukuthi alandele imiyalo oyicacisayo, njenge Ungachofoza kuphi ukubuka inqola yakho yokuthenga?, noma Ungachofoza kuphi ukukhetha ithempulethi yebhulogi yakho?.
Ukuhlolwa Kokuncamelayo - Izilingo Zokuncamelayo zicela umhloli ukuthi akhethe phakathi kwezindlela ezimbili zokwakha. Ungacela abahloli ukuthi bakhethe ngokuya ngemfanelo ethile (isb. Yimuphi umklamo obukeka unokwethenjelwa?), noma umane ubabuze ukuthi bakhetha ini okuphelele.
Ukuhlolwa kwe-Nav Flow - Ukuhlolwa kwe-Nav Flow kunquma ukuthi abahloli bangakwazi yini ukuzulazula ngempumelelo kumklamo wakho. Ulayisha uchungechunge lokwakhiwa kwamakhasi, bese ucacisa lapho umhloli kufanele achofoze khona ukuze aqhubeke. Izinga lokuphumelela nokwehluleka kwabahloli lirekhodwa esigabeni ngasinye.
Tags: umbono womklamoumbonoindawo yokusebenzaukusebenziseka kokuhlolwaukuhlolwa komsebenzisi